सारिका किन नोटिस भइनन् ? « Mazzako Online
सारिका किन नोटिस भइनन् ?
अभिनेत्री तथा मोडल सारिका घिमिरले नेपाली फिल्म क्षेत्रमा संघर्ष गरेको केही बर्ष भैसक्यो । उनले केही फिल्ममा काम पनि गरिसकेकी छिन् । तर, उनलाई न त फिल्मीकर्मी, न त मिडिया वा न त दर्शकले नै नोटिस गर्न सकेका छन् ।
सारिका म्यूजिक भिडियोदेखि फिल्ममा फाट्टफुट्ट काम गरिरहेकी नै हुन्छिन् । नेपाली फिल्ममा लामो समयसम्म अगाडि जाने उनको योजना पनि छ । तर, क्लिक हुने फिल्ममा काम गर्न नसक्दा उनको यात्रा खासै गतिलो तरिकाले अगाडि बढेको छैन ।
हुनत, सारिका जस्ता कैयौ यूवतीहरु नेपाली फिल्ममा ठूलो सपना देखेर आएका हुन्छन् । तर, क्लिक हुन नसक्दा करिअर ढुलमुले तरिकाले अगाडि बढेको पाइन्छ । सारिकालाई एउटा गतिलो फिल्म र व्यानरको आवश्यकता छ । के उनले त्यो पाउलिन् त ?